Muddada Iibsiga & Su'aalaha La Weydiiyo - Pandawill Technology Co., Ltd.
Sidee Pandawill u amraa qaybaha amarada Turn-Key?
Waxaan kugula talineynaa biilkaaga saxda ah ee dalbanaya 5% ama 5 dheeri ah inta badan qaybaha. Mararka qaarkood waxaan la kulannaa ugu yaraan / amarro dhowr ah oo qaybo dheeraad ah ay tahay in la iibsado. Qaybahan ayaa wax laga qabtaa, iyo oggolaansho laga helay macaamiisheena ka hor inta aan la dalban.
Shaqooyinka furaha furaha, maxay Pandawill ka qaban doontaa isgoyska qayb ama bedelka?
Pandawill waxay kaa caawin kartaa haysashada alaabada, laakiin kuma badali doonno qaybo ka mid ah biilkaaga waxyaabo aan horey u haysanay. Waxaan soo jeedin karnaa iskutallaab ama ka caawin karnaa xulashada qaybaha haddii loo baahdo, laakiin waxaan u diri doonnaa warqad xog ah si aan ugu baahanno oggolaanshaha macaamiisha ka hor inta aan la dalban.
Waa maxay waqtiga hogaanka amarka furaha?
Waqtiga hogaaminta waxqabadka waxaa sii dheer waqtiyada leedhka.
2.Haddii aan dalbanno guddiyada wareegga, xaaladaha intooda badan tani waa qaybta waqtiga ugu dheer hoggaanka, waxaana go'aamiya baahida macaamiisha.
Dhammaan qaybaha waa in la helaa kahor intaan la bilaabin qaybta kulanka ee amarka.
Pandawill miyuu dalban karaa kaliya qaybaha ama kaliya guddiga wareeggeyga?
Haa, waan dalban karnaa waxa aad nooga baahan tahay inaan ku siino, inta kalena waad bixin kartaa. Waxaan u tixraacnaa amarka noocan ah shaqo qayb-fure ah.
Maxaa ku dhacaya waxyaabaha haray amarada Turn-Key?
Qaybaha leh shuruudaha iibsashada ugu yar waxaa lagu soo celiyaa PCB-yada la dhammeeyay ama Pandawill waxay ka caawisaa inay hayaan alaabada sida la codsaday. Dhammaan qaybaha kale looma celiyo macaamilka.
Maxaan ubaahanahay inaan u diro amarka furaha?
1.Bill-ka maadiga ah, oo lagu buuxinayo faahfaahin qaab sare ah.
Faahfaahin dhammaystiran waxaa ka mid ah - magaca soo saaraha, nambarka qaybtiisa, naqshadeeyayaasha ref, sharraxaadda qaybaha, tirada
3.Faylasha Gerber oo dhameystiran
4.Centroid data - feylkaan waxaa abuuri kara Pandawill haddii loo baahdo.
Ka waran waxyaabaha xasaasiga u ah qoyaanka?
1.Qaabooyin farabadan oo SMT ah ayaa dhuuqa qadar yar oo qoyaan ah waqtiga. Marka qaybahaani ay dhex maraan foornada soo-celinta, qoyaankaas ayaa ballaarin kara oo dhaawici kara ama burburin kara jab. Mararka qaarkood waxyeelada waxaa loo arki karaa muuqaal ahaan. Mararka qaarkood ma arki kartid gabi ahaanba. Haddii aan u baahanahay inaan karino qaybahaaga, shaqadaada waxaa laga yaabaa inay dib u dhacdo illaa 48 saacadood. Waqtiga dubista looma xisaabin doono waqtigaaga leexashada.
2.Waan raacnaa JDEC J-STD-033B.1 istaandarka.
3.Taas macnaheedu waxa weeye haddii qaybta lagu calaamadeeyay inay tahay mid qoyaan u nugul ama furan yahay oo aan calaamadeysnayn, waxaan go'aan ka gaari doonnaa haddii ay u baahan tahay in la kariyo ama aan ku soo wacno si aan u go'aamino haddii ay u baahan tahay in la dubo.
4-ta 5 iyo 10 maalmood ee soo noqda, tani waxay u badan tahay inaysan dib u dhac keenayn.
5. Shaqooyinka 24 iyo 48 saac, baahida loo qabo in la dubo waxyaabaha waxay sababi doontaa dib u dhac ilaa 48 saacadood ah oo aan loo tirin doonin waqtigaaga habaynta.
6.Haddii ay suurogal tahay, markasta noo soo dir qaybahaaga oo ku shaabadaysan baakadka aad ku heshay.
Sidee baan ugu baahanahay inaan keeno qaybo?
Boorso kasta, saxaarad, iwm waa in si cad loogu calaamadeeyaa lambarka qaybta ku qoran biilkaaga.
1.Adoo ku tiirsan adeegga golaha aad dooratay, waxaan ku shaqeyn karnaa cajalad la jaray oo dherer kasta ah, tuubooyin, duubis iyo baakidh. Waxaan u maleyneynaa in taxaddar la sameyn doono si loo ilaaliyo sharafta qaybaha.
2.Haddii ay ka kooban yihiin qoyaan ama xaalad xasaasi ah, fadlan ku xir baakidh ahaan si rasmi ah kontaroolo iyo / ama baakad xiran
3.SMT qaybaha laga bixiyay oo dabacsan ama tiro badan waa in loo tixgeliyaa inay yihiin meelayno dalool. Waa inaad markasta nala cadeysaa kahor intaadan soo xigan shaqo leh qaybo dabacsan oo SMT ah. U diristooda dabacsan waxay sababi kartaa dhaawac waxayna u badan tahay inay kugu kici doonto wax ka qabasho. Had iyo jeer way ka qaalisan tahay inaad iibsato xarig cusub oo ka kooban markaa na isku day oo isticmaal dabacsan.